विश्वले कोरोना भाइरसबाट पूर्ण रुपमा मुक्ति कहिले पाउँला? यस्तो छ अनुसन्धानकर्ताको दाबी – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विश्वले कोरोना भाइरसबाट पूर्ण रुपमा मुक्ति कहिले पाउँला? यस्तो छ अनुसन्धानकर्ताको दाबी
२९ वैशाख : कोरोना भाइरसले विश्वभर त्रासको अवस्था सिर्जना गराइरहेको छ । हालसम्म विश्वभर २ लाख भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने लकडाउनका कारण आधाभन्दा बढी जनसंख्या घरभित्र सीमित बन्न बाध्य छ । यसका बाबजुद केही देशहरुमा पछिल्लो समय लकडाउनलाई खुकुलो बनाइएको छ ।
यद्यपी विश्वभरका मानिसहरुको मुखमा आउने सबैभन्दा ठूलो र पहिलो प्रश्न रहेको छः आखिर कोरोनाबाट विश्वले कहिले पूर्ण रुपमा मुक्ति पाउँला त? लकडाउन पूर्ण रुपमा समाप्त कहिले होला त? हामीहरुले फेरि पहिलेको जस्तै जीवन बाँच्न कहिले पाउँला? यिनै प्रश्नहरुका बीचमा सिंगापुरबाट एउटा आशालाग्दो खबर सार्वजनिक भएको छ ।
सिंगापुर यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी एण्ड डिजाइनका अनुसन्धानकर्ताहरुले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स ड्रिभेन डाटा एनालाइसिसका माध्यमबाट विश्वबाट कोरोना भाइरस कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा बताएका छन् ।
अध्ययनका अनुसार, विश्वका सबै देशहरुबाट कोरोनाको ९ डिसेम्बर २०२० सम्म अन्त्य हुनेछ । यसैगरी अमेरिकामा २७ अगस्टसम्ममा, स्पेनमा ७ अगस्टसम्ममा, इटालीमा २५ अगस्टसम्म र भारतमा २६ जुलाईसम्म कोरोनाको अन्त्य हुने अनुमान रहेको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले यस महामारी समाप्त हुने तीन अनुमानित समय बताएका छन् । जसका अनुसार, कोरोना ९७ प्रतिशतसम्म, ९९ प्रतिशतसम्म र शतप्रतिशत अर्थात् १०० प्रतिशतसम्म कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने बारेमा रहेको छ ।
यद्यपी अनुसन्धानकर्ताहरुले आफूहरुको अनुमानको समयसीमामा थोरै केही परिवर्तन सम्भव भएको स्पष्ट पारेका छन् । किनकि अनुमानका अनुसार, चीनमा कोरोना अन्त्य हुने समय ९ अप्रिल २०२० बताइएको थियो । यसै दिन चीनले वुहानको लकडाउन खोलेको थियो । यद्यपी चीनमा हाल पनि संक्रमणका केही मामलाहरु आइरहेका छन् । तर संक्रमित संख्या भने एकदमै कम मात्र रहेको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले यो आँकलन विश्वभरमा दैनिक कोरोनाका नयाँ घटना, मृत्यु र संक्रमणबाट ठीक भएका बिरामीहरुको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा गरेका हुन् । उक्त अध्ययनका अनुसार, विश्वमा कोरोनाको ९७ प्रतिशत मामला ३० मे सम्म, ९९ प्रतिशत १७ जून सम्म र शतप्रतिशत मामला ९ डिसेम्बर २०२० सम्म समाप्त हुनेछ । मेरोलगानी File Photo
डब्‍ल्‍यूएचओ ले भन्यो कोरोना झनै व्यापकरुपमा बढ्दै, सावधानी अपनाउन अनुरोध !